တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်မှုဆက်ဆံရေး၏ အဓိကအချက်အလက်များ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီးကျွမ့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဖိန်ရှန့်မြို့ရှိ တရုတ်-ဗီယက်နမ် နယ်စပ်ရှိ ချစ်ကြည်ရေးဂိတ်ဆိပ်ကမ်းအား ဖြတ်သန်းရန်စောင့်ဆိုင်နေသည့် မော်တော်ယာဉ်များကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) တို့သည် ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ထူထောင်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်၌ ကြေညာခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရှိ တရုတ်နိုင်ငံမှ ရန်ပုံငွေဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Binondo-Intramuros တံတား လုပ်ငန်းခွင်နေရာတွင် အလုပ်သမားများအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်၌ တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ရှီးကျွမ့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မြို့တော် နန်နင်းတွင် ၁၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ ရွေးချယ်နေသူများအား စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ယခုနှစ်သည် တရုတ်-အာဆီယံ ဆွေးနွေးဖက်ဆက်ဆံရေး နှစ် ၃၀ ပြည့်မြောက်သည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ ကျယ်ပြန့်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းတွင် ကြီးမားသော ပြောင်းလဲမှုများ သက်သေပြုလျက် နှစ် ၃၀ အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံတို့သည် အချိန်ကာလ၏ အခွင့်အလမ်းများကို ဖမ်းဆုပ်လျက်ရှိပြီး လျင်မြန်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိလျက်ရှိသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများမှာ နှစ်ဖက်စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အောင်မြင်မှုများကို လှစ်ဟပြလျက်ရှိပေသည်။
— ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် အာဆီယံ၏ အကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ် ၁၂ နှစ်ဆက်တိုက် ရပ်တည်လျက်ရှိသလို အာဆီယံသည်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။
— တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံကြား ကုန်သွယ်မှုမှာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခဲ့ချိန်မှစ၍ ၈၅ ဆ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
— ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံကြား ကုန်သွယ်မှုသည် ဆက်လက်တိုးချဲ့လျက်ရှိပြီး ယမန်နှစ်ကထက် ၃၈.၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
— အာဆီယံသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အဓိက ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နေရာနှင့် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြောင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ နည်းပညာမြင့်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး စသည့်ကဏ္ဍများ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပွင့်လင်းလျက်ရှိသည်။
— ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လအထိ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံကြား အပြန်အလှန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၁၀ ဘီလီယံ ကျော်သွားပြီဖြစ်ကာ အာဆီယံအဖွဲ့နိုင်ငံများတွင် စီမံကိန်းသဘောတူစာချုပ်များမှ တရုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဝင်ငွေများမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅၀ ဘီလီယံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
— တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း နန်နင်းမြို့တွင် စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်က ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော ၁၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲနှင့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် စုစုပေါင်း သဘောတူစာချုပ် ၁၇၉ ခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း တန်ဖိုးအနေဖြင့် ယွမ် ဘီလီယံ ၃၀၀ ကျော်ဖြင့် စံချိန်တင်ခဲ့သည်။
— ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက်ဖြစ်သော ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအား အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အပါအဝင် အာရှ-ပစိဖိတ်နိုင်ငံ ၁၅ နိုင်ငံက ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ထိုသဘောတူညီချက်သည် ဒေသတွင်း စီးပွားရေး ပေါင်းစည်းမှု၊ နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုအတွက် ကြီးမားသောအရွေ့တစ်ခုအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တည်ရှိနေသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံကြား လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဖလှယ်မှုများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၆၅ သန်းကျော်ရှိခဲ့သည်။ နှစ်ဖက်အနေဖြင့် ကျောင်းသားနှင့် ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်အား ကူးလူးဖလှယ်ခြင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ညီအစ်မမြို့များ အစုံ ၂၀၀ ကျော်လည်း ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပေသည်။ (Xinhua)
Highlights of China-ASEAN economic, trade ties
Source: Xinhua| 2021-11-22 18:48:19|Editor: huaxia
BEIJING, Nov. 22 (Xinhua) — China and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on Monday announced the establishment ofacomprehensive strategic partnership.
This year marks the 30th anniversary of China-ASEAN dialogue relations. Witnessing intensive development of economic globalization and profound changes in the international landscape, the 30 years have also seen China and ASEAN seizing opportunities of the times and achieving leapfrog development.
The following facts and figures offeraglimpse of the achievements of bilateral economic and trade cooperation.
— In 2020, China remained ASEAN’s largest trading partner for 12 consecutive years, while ASEAN became China’s largest trading partner.
— Trade between China and ASEAN has skyrocketed by 85 times since the two sides established their dialogue relations in 1991.
— In the first half of 2021, bilateral trade between China and ASEAN continued robust expansion, registeringa38.2 percent year-on-year growth.
— ASEAN has become one of China’s major outbound investment destinations and sources of foreign direct investment, with cooperation booming in sectors such as manufacturing, agriculture, infrastructure, high-tech, the digital economy, and the green economy.
— As of June 2021, mutual investment between China and ASEAN exceeded 310 billion U.S. dollars, while the business revenue of Chinese enterprises from project contracts in ASEAN countries approached 350 billion U.S. dollars.
— At the 18th China-ASEAN Expo and China-ASEAN Business and Investment Summit that closed on Sept. 13 in the southern Chinese city of Nanning,atotal of 179 deals wortharecord-high combined value of over 300 billion yuan (about 46.59 billion U.S. dollars) were signed.
— The Regional Comprehensive Economic Partnership, the world’s largest free-trade deal, was signed last November by 15 Asia-Pacific countries, including ASEAN’s 10 member states and China. It is widely deemedamassive move for regional economic integration, multilateralism and free trade.
— Personnel exchanges between China and ASEAN exceeded 65 million in 2019. The two sides have exchanged over 200,000 students and formed more than 200 pairs of sister cities. ■
Photo : 1 – Aerial photo taken on Jan. 3, 2020 shows vehicles waiting to pass the port of the Friendship Pass on the China-Vietnam border in Pingxiang, south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Cao Yiming)
2- Workers work at the construction site of the China-funded Binondo-Intramuros Bridge in Manila, the Philippines, Nov. 18, 2020. (Xinhua/Rouelle Umali)
3- People select goods at the 18th China-ASEAN Expo in Nanning, capital of south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sept. 11, 2021. (Xinhua/Lu Boan)